နည်းလမ်းများ Archives - 9style
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် က အဆိုပိုင်းမှာသာမက သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်အောင်မြင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်က အခုဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးလို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားထားတဲ့ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ စန္ဒီမြင့်လွင်က ကလေးမေမေတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် မိသားစုအရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူတူ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို မျှတစွာ လုပ်ကိုင်နေတာ…
အချိန်တိုအတွင်းဝိတ်ကျသွားတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကိုဝေမျှလာတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
မအေးသောင်းဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မသိတဲ့သူရှားပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အများစုကလည်း ပုရိသတွေ ပါပဲ။မိန်းကလေးတိုင်းလည်း အားကျရမယ့် အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်း မအေးသောင်းပါပဲနော်။မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုရင် မြင်သူငေးစေတဲ့ အလှကို ရရှိထားသူလေးပါ။ဒ့ါအပြင် သူမ လှုပ်ရှားမှုတွေကို Fb မှာ ပရိတ်သတ်တွေကို အမြဲတမ်း မျှဝေတတ်ပါသေးတယ်။အနုပညာလောကမှာ…
Thi Ha September 9, 2019
၂ ပတ်အတွင်း (၈) ပေါင် ဝိတ်ကျသွားတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အံ့ဖွယ်နည်းလမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်သဇင်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မျက်နှာချိုချို၊ ချစ်စဖွယ်အပြုံးနဲ့ အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အဆီအပိုမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေးကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါနော်…ဒါ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ကစ်ကစ်နေမကောင်းဖြစ်တော့ ရောဂါစဖြစ်ကတည်းက ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးကလည်း ခင်သဇင်ပါပဲ…. အဲဒီလို…
Thi Ha September 7, 2019
ဆင်တုတ်ကွေးဖြစ်ပြီးနောက်မြန်မြန်နာလန်ထူအောင်ဦးစားပေးစားရမည့်အစားအစာများ အခု အဖြစ်များနေကြတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေး ခေါ် Chikungunya ဟာ ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်လာတဲ့ခြင်ကိုက်တာခံရပြီး ၂ ရက်ကနေ ၇ ရက်အတွင်း လက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။စစချင်းမှာ ကိုယ်ပူတာ၊ အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ခဲတာခံစားရတယ်၊ နောက်တော့ နုံးတာ၊ ကြွက်သားနာကျင်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အရေပြားအနီကွက်ဖြစ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။…
Thi Ha August 27, 2019
ခေါင်းချွေး အရမ်းထွက်တာ ဘာကြောင့်လဲ… ရေချိုးပြီးခါစ အရမ်းထွက်ပါတယ် (ဆရာကြီး ဦးရန်အောင်)
ခေါင်းချွေး အရမ်းထွက်တာ ဘာကြောင့်လဲ…ရေချိုးပြီးခါစ ခေါင်းချွေးအရမ်းထွက်ပါတယ် …. မေးသူ အမျိုးသား။ ကလေးက ညတိုင်း အိပ်ယာထဲမှာ ချွေးထွက်ပါတယ်…. ဘာဆေးသောက်ရမလဲ…… ကလေး။ ခြေဖဝါးလက်ဖဝါး အမြဲချွေးထွက်ပါတယ် ….. မေးသူ အမျိုးသမီး။ ခြေဖဝါး လက်ဖဝါး…
Thi Ha August 22, 2019
ဆံပင်ကျွတ်သူ ၊ ဆံပင်နက်ချင်သူများအတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလေးပါ
ဒီနည်းလေးက ယုမွန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီး တကယ်ထူးခြားလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ….၄ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅%အကျွတ်သက်သာ မဲနက်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ယုမွန် အရင်က အစာအိမ်ရောဂါအခြေနေဆိုးလို့ ၂နှစ်လောက် နနွင်းနေ့စဉ် ၁၀လုံးသောက်ရပါတယ် …အဲ့ကထဲက ရှိသမျှ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါပြောင်တဲ့အထိပါ…ဆေးနည်းပေါင်းစုံကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး …ထိပ်ပါပြောင်ပြီး…
Thi Ha August 21, 2019
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တွေသိထားတဲ့ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်တွေက တစ်ခါတစ်ရံ မှားယွင်းနေတတ်ပါ တယ်။ဥပမာ ဘယ်အချိန်မှာထမင်းမစားရတော့ဘူးတို့၊ဘယ်အစားအစာက ကယ်လိုရီများတယ်တို့ စသဖြင့်မှတ်ထားပြီး အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့တောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တစ်ချို့ကမှားယွင်းနေတာ ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်လျှော့ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေမှားနေလဲ၊ဘာတွေကအမှန်လဲဆိုရင်… – ည၆နာရီကျော်ရင် ဘာမှမစားရတာမဟုတ်ပဲ မအိပ်ခင်…
သွားချေးကျောက်တွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေလား ? သွားတွေဝါနေလို့ ရယ်လိုက်တိုင်း ပါးစပ်တောင် သိပ်မဟရဲတော့ဘူးလား ။ သွားချေးကျောက်တွေကို အချိန်ကြာတဲ့အထိထားပြီး မဖယ်ရှားပေးဘူးဆိုရင် ပါးစပ်အနံ့သက်ဆိုးတွေဖြစ်စေပြီး သွားကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ သွားတွေ အကုန်ကျိုးပြီး စားချင်တာ မစားရတဲ့ဘဝ…
Thi Ha August 20, 2019
ခြေသလုံးကြော တောင့်တင်းသူများ နှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ( သြ / သု ) ဆရာကြီး ဦးရန်အောင်)
ခြေသလုံးကြော တောင့်တင်းသူများ ……. နှစ်ချက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ရေချိုးခါနီး ခြေဖဝါးဆားပွတ်ပြီးမှ ရေချိုးပါ။( အပူထုတ် ရေချိုးနည်း လမ်းညွှန်ချက်ကို တင်ထားပြီးပါပြီ )တောင့်တင်းတဲ့နေရာကို မန်ကျည်းရေ ကျဲကျဲနဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး ပွတ်ပေးပါ။ ခြေပေးပါ။ ခြေပြီးမှ ရေချိုးပါ။…
Thi Ha August 19, 2019
အာပုပ်ဆော်နံတာ၊ သွားမှာကျောက်တည်တာနဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းစေမဲ့ သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
သွားနဲ့ခံတွင်းကျန်းမာရေးက သိပ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ စကားပြောဆိုဆက်သွယ်ရမှာ ခံတွင်းနံ့မဆိုးဖို့လိုသလို အပြုံးချင်းဖလှယ်ရာမှာ ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက် ဘယ်လိုသွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်ယူအသုံးပြုရမလဲလို့ တွေးနေပြီလား။ အဲဒီလို ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်စရာမလိုဘဲ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း …. အုန်းဆီသန့် စားပဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ….…